Iisofa, ikhitshi, igumbi lokuhlala, igumbi lokulala
Ukuba ungumxhasi wendlela yakudala kwaye uyayithanda ifanitshala eyenziwe ngomthi, eli nqaku liza kuba lelakho ngokukodwa. Ukulungiswa kwemithi nganye kwahlukile kwaye kuthe ngqo. Ukuba ufuna ukuba ifenitshala yakho isetyenziswe zezinye izizukulwana, sicebisa ukuba ukhethe ifenitshala ikakhulu kwimithi eqinileyo. Uhlobo lwenkuni yenye yezona zinto zintle onokuzibeka ngaphakathi kwakho. Ifanitshala yeenkuni eziqinileyo Esi sisiqinisekiso se-100% sokhuni lwendalo. […]
1 2 ... 65 izithuba abadala
Phuma kuhlobo lweselula